Candilazo: यो के हो, यो कसरी उत्पादन गरिन्छ र यो कसरी भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 02/11/2021 09:39 | Divulgation
धेरै पटक आकाशले हामीलाई अचम्मको दृश्यले चकित बनाउँछ। धेरै अवसरहरूमा हामीले आकाशको रङ प्यालेटको कारण एक शानदार सूर्यास्तलाई विचार गर्न छोडेका छौं। त्यहाँ एक मौसमी घटना को रूपमा चिनिन्छ फुटलाइट जसलाई फ्लश पनि भनिन्छ र जुन मनमोहक हुनका लागि परिचित छ। यो एक आगोको आकाश हो, रातो, सुन्तला, गुलाबी र बैजनी रंग को छायाहरु संग रंगहरु भरिएको छ। स्वर्गीय गिरफ्तारहरू धेरै उत्सुक छन् किनभने कहिलेकाहीँ तपाईं तिनीहरूलाई खोज्न जान सक्नुहुन्छ तर तपाईंले तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई candilazo बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउन जाँदैछौं, यसलाई किन भनिन्छ र यसको विशेषताहरू के हुन्।
1 बत्ती के हो
3 के यो भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ?
बत्ती के हो
पप संस्कृतिले अवशोषित गर्ने कुराको विपरीत, यो "आउने" कालो बादल होइन तर यसको पूर्ण क्षमतामा सूर्यको प्रकाशको प्यालेट हो। तर... दिउँसो किन नभेट्ने ? कुन कारकहरूले यो घटनालाई चम्काउनेछ? यसको विकास र तीव्रतालाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने कारकहरू हेरौं: सूर्यको किरण र पृथ्वीमा यसको घटनाको कोण, आकाशमा बादलहरूको प्रकार र वायुमण्डलमा कण वा नमीको मात्रा।
सूर्यको किरण सबै रङहरू मिलेर बनेको हुन्छ जुन "दृश्य स्पेक्ट्रम" सँग सम्बन्धित छ र हामीले इन्द्रेणीमा देख्ने रङहरू राम्रो उदाहरण हुन्। साथै, यी सबै रंगहरू कम वा तीव्र रूपमा छरिएका छन्, जुन मुख्यतया हाम्रो वायुमण्डलमा सौर्य किरणहरूको घटनाको कोणमा निर्भर गर्दछ, जस्तै तल देखाइएको छ:
कहिले सूर्यको किरणहरू वायुमण्डलमा लम्ब हुन्छन्, सूर्य क्षितिजमा जति माथि हुन्छ (दिउँसोमा सौर्य चरम), त्यति नै ठूलो तीव्रता र छोटो तरंगदैर्ध्यको नीलो प्रकाश (५०० एनएमभन्दा कम) वायुमण्डलमा छर्छ। वातावरण अधिक सफल छ, आकाश (नीलो) र बादलहरू (सेतो वा खैरो) त्यो रंगको साथ बाढी।
जब सूर्यको किरणले वायुमण्डललाई "अधिक समानान्तर" तरिकाले संकेत गर्छ, साँझ वा बिहान के हुन्छ, निलो बत्ती पछि छर्छ र बाटोमा हराउनेछ। यस अवस्थामा, रातो बत्ती लामो हुनेछ। यसले तरंगदैर्ध्य (> 600 एनएम) मा हावी हुन्छ, "तलबाट" बादलहरूलाई उज्यालो पार्छ।
बादल बिना टर्चलाइट हुँदैन, हामी अघिल्लो खण्डको अन्त्यमा सहज रूपमा देख्न सक्छौं। हामीलाई रातो बत्ती प्रक्षेपित गर्न क्यानभास चाहिन्छ ताकि हामी आकाशबाट प्रकाश देख्न सक्छौं। सामान्यतया मौसम विज्ञानमा हामी आकाशमा तिनीहरूको उचाइ अनुसार विभिन्न प्रकारका बादलहरूको बारेमा कुरा गर्छौं: निम्न, मध्यम र उच्च।
खैर, यो घटना जान्नको लागि, हामी अन्तिम दुईको अस्तित्वमा निर्भर गर्दछौं: मध्यम (2000 मिटर भन्दा माथिको जग) र उच्च (5000 वा 6000 मिटर भन्दा माथिको जग)। यस अवस्थामा, कम बादलहरूले हामीलाई मद्दत गर्दैन किनभने तिनीहरूले आंशिक वा पूर्ण रूपमा सूर्यको किरणहरू अवरुद्ध गर्नेछन्। हामीले उज्यालोलाई तिनीहरूको तलको बादलहरूबाट पार गर्न र तिनीहरूको तलबाट उज्यालो हुन दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ ठूलो कम्युलोनिम्बस क्लाउडको शिखर पनि उज्यालो हुन्छ।
यो ध्यान दिनुपर्छ कि यस घटनाको केही सूक्ष्मताहरूले यस घटनाको प्रदर्शन अवस्थाहरू परिवर्तन गर्न सक्छ:
उच्च आर्द्रताले सौर्य विकिरणको अंश अवशोषित गर्दछ, जुन चिल्लो छ। यो सामान्यतया वर्षा पछि, विशेष गरी वर्षाको समयमा टर्चलाइट प्रयोग गर्दा हुन्छ।
प्रदूषक कणहरूले "इग्निशन" थप तीव्र बनाउँदछ। अत्यधिक प्रदूषित मानवशास्त्रीय गतिविधिहरू पछि, दिउँसो धेरै पटक हुने कुराहरू।
के यो भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ?
तपाईं एक पटक भन्दा बढी हराउनुभएको हुनुपर्छ, एक काल्पनिक सूर्यास्त वा सूर्योदयको फोटो खिचिएको हेर्दै, यी सबै बादलहरू तीव्र रातो र सुन्तलाले उज्यालो हुन्छन्, हैन? क्यामेराले कुनै पनि ल्यान्डस्केप फोटोलाई कलाको वास्तविक कार्यमा परिणत गर्न सक्छ।
तर, घरमा वा कार्यस्थलमा कारमा फ्ल्यासबाट तपाई कति पटक छक्क पर्नु भएको छ? पक्कै धेरै पटक। तपाईं आफ्नो टोलीसँग सुन्दर ठाउँमा सूर्योदय वा सूर्यास्त खिच्न कति पटक बाहिर जानुभएको छ र तपाईंले उज्यालो हुने सोचेको बादल खैरो भयो? पक्कै पनि अरू धेरै छन्।
तसर्थ, हरेक ल्यान्डस्केप फोटोग्राफरले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा सोध्ने प्रश्न हो: के तपाइँ फ्ल्यासलाइटको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ? हामी कसरी 100% थाहा पाउन सक्छौं कि सूर्योदय वा सूर्यास्त रंगहरूको प्रदर्शन हुनेछ? खैर यो प्रश्नको सरल जवाफ यो हो होइन, यो भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, कम्तिमा ठ्याक्कै होइन।
तर हो, त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन यो घटनाको कारण हुन सक्छ। एकचोटि तपाईंले यी कारकहरू बुझ्नुभयो भने, तपाईं उत्कृष्ट सूर्योदय र सूर्यास्तहरूको भविष्यवाणी गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मनपर्ने स्थानमा क्यामेराले खिच्न सक्नुहुन्छ।
बादलको अभावमा, सामान्य अवस्थामा, सूर्यास्तमा रातो र सुन्तलाको तीव्रता बाहिर निस्कने समयमा भन्दा बढी हुन्छ। यो किनभने दिउँसो अधिक वायुजनित कणहरू छन्, किनकि दिनको समयमा अशान्त आन्दोलन जमिन नजिकै सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। कि रातमा, अधिक सामग्री वायुमण्डलमा भाग्छ जसले प्रकाश छर्छ।
विस्फोटक ज्वालामुखी विष्फोटहरूले स्ट्र्याटोस्फियरमा यति धेरै कणहरू उत्सर्जन गर्दछ कि तिनीहरू चाँडै जमिनभरि छरपस्ट हुन्छन्, केही अवस्थामा महिनौंसम्म शानदार सूर्यास्त र सूर्योदयको कारण बन्छन्। यी बत्तीहरू विभिन्न युगहरूका असंख्य चित्रहरूमा चित्रण गरिएका आकाशका रङहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चित्रकला र मौसम बीच एक रोचक सम्बन्ध स्थापना।
रातो आकाश वायुमण्डलमा ज्वालामुखी उत्पत्तिका कणहरूको उपस्थितिको कारणले होइन, तर बादलले यसलाई रोक्दा साँझको प्रकाश छरिएको कारण हो। धेरै अवस्थामा, यी बादलहरू सामान्यतया अगाडि जोडिएको तथ्यले हामीले पहिले उल्लेख गरेको उखानलाई प्रमाणित गर्दछ ("सूर्यास्तमा क्यान्डिलाजो, सूर्योदयमा पानी")।
बेलायती मौसमविद् एलन वाट्सले टिप्पणी गरे: "बिहानको आकाश बेलुका भन्दा मौसमको राम्रो भविष्यवाणी गर्ने हो। पूर्वी क्षितिजमा आकाश सफा हुनुपर्छ र बादल उच्च हुनुपर्छ। यो तब हुन्छ जब तातो मोर्चाहरू वा अवरोधहरू पूर्वतिर सर्छन्। स्थिति, त्यसैले पूर्वानुमान गम्भीर मौसमको लागि हो। सन् १९२० को दशकमा लन्डनमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि बिहानीपख झरेको र त्यसपछिको २४ घण्टामा ७० प्रतिशत समय पानी परेको थियो, र धुमिल साँझपछी सुख्खा मौसम पनि बारम्बार आएको थियो।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाईं candilazo र यसको विशेषताहरु बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » फुटलाइट